China Pet Cat Simple Disc Cool na Funny Cat Isiokwu Pet Cat Kitten Cat Okenye Cat Okpomọkụ Nwere Oyi Nwere Obere Nkpu Cat Cat Toy ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | MiaSein
Pet Cat Simple Disc Cool na Funny Cat Table Pet Cat Kitten Cat Okenye Cat Okpute Ezumike Okpuru Obere Ntanetị Katị Cat Cat Toy
Aha ngwaahịa: Pet Cat Simple Disc Cool na Funny Cat Table Pet Cat Kitten Cat Okenye Cat Okpute Ezumike Okpuru Obere Ntanetị Katị Cat Cat Toy
Nkọwa:The ihe na àgwà nke sisal na-họọrọ, nke na-adịghị ọchapụ site chemical ngwọta na nwere mbụ sisal fiber acid uto. Nchedo na nchedo gburugburu ebe obibi, ihe nchekwa gburugburu ebe obibi dị elu na-adịgide adịgide ma nwee ogologo ndụ ọrụ, akara ọhụụ gburugburu ebe obibi na-enweghị mgbakasị. Guzosie ike ma kwụsie ike, yana usoro nhazi nke ọma, ọ ga-adị mma iji gbochie ngbanwe. Kpoo agwa pusi nke olulu egwu, ma nwee ike izu ike mgbe ike gwụrụ.
Usoro nke ọzụzụ nwamba iji jiri pusi na-arịgo: ọzụzụ nke nnụnnụ puru na-ejide bọọdụ ma ọ bụ kọlụm osisi ga-amalite site na nwata. Usoro a bụ itinye osisi ma ọ bụ mbadamba osisi na ebe a na-ahụ anya nke pusi ga-agbago na ala iji chọta akụkụ ọ dị njikere ịghọta. Ọ bụrụ na ọ bụghị, onye nwe ya nwere ike iji nwayọ metụ isi pusi aka ya wee pịa isi iji manye ya ijide osisi. Mgbe ịchisịrị, mmiri gland na ụkwụ pusi ga-ete n'akụkụ akụkụ ọkọ. N'ihi ísìsì nke nzuzo ahụ, pusi ga-aga n'osisi osisi ịcha.
Item aha ya ： Oke ugwu
Style: Bee, bọọlụ hemp
Agba: Size (na cm): 27 * 16cm
Njirimara: Ọ nwere ike inye nwamba ohere igwu egwu. Dị ọdịdị ahụ nwere akụkụ atọ dị mma maka ọdịdị ugwu nke cat, na kọlụm nke eriri hemp nwere ike ime ka pusi ghaa mbọ ya.
Ricdị ricdị: Efere + ute okpomọkụ
Methodsacha usoro: Spgba ọgwụ mmiri ọgwụ na-egbu mmiri ma ọ bụ PET na-ehichapụ ya, kamakwa tụgharịa akụkụ nke ọgwụ ahụhụ nke mpụga maka ịgba. Ọ bụrụ na ị nwere igwe mkpofu ike dị elu, ịnwekwara ike iji ihe nhicha ọkụ wepu mites.
Usoro nchekwa: Chekwaa ebe dị jụụ na nkụ
Biko kwuru: Ngwaahịa a haziri ma mepụta site na ụlọ ọrụ anyị naanị. Ngwaahịa a anaghị akwado nhazi. Ntuziaka aka, enwere ụfọdụ njehie, biko buru ezigbo ihe dị ka ọkọlọtọ. Ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju na ngwaahịa a, biko kpọtụrụ ndị ahịa.
Nke gara aga: Dog Clothes Mgbụsị akwụkwọ na Winter ghọrọ a mkpa Nkebi Teddy Bichon Hiromi Poodle Pet Clothes nwa nkita anọ legged T uwe elu Cross Dress Wukong Pet Coat
Osote: Pet Dog Nnukwu Mpịakọta Mpịakọta Poop Picker
Nnukwu Dog Coat Ọkara Nnukwu nkịta na-ekpo ọkụ na Wi ...
High mezuwo Pet mposi New Type nke mposi Pet Po ...
Pet Uwe Cosplay Nkịta Mgbakwasa n'ime Santa Cla ...